Huiquan Traffic Zvivakwa
Yakasimbiswa muna 2006, Shandong Guanxian Huiquan Traffic Facilities Co., Ltd. iri muGuanxian New Century Industrial Zone, Shandong Province. Iyo bhizinesi yakanyoreswa capital yemamirioni makumi maviri CNY, inovhara nharaunda inenge 43,290 mativi emamita. Tiri mumwe nzwisisika sangano emakambani kuti kushandisa kugadzirwa, rokutengesa inopisa Dip kwakakurudzira guardrail.
Iwo mabhaudhi anotsanangurwa muANSI B1.13M yeGiredhi 6 g kushivirira. Bolt zvinhu zvinoenderana neASTM ...
Iyo posvo ndeye kunyanya kutevera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Mashoko acho ...
Iyo yekudzivirira inonyanya kutevedzera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Iyo bonde ...
Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa).
Kurapa kwepamusoro kunopiswa kwakakurirwa, kutevera iyo AASHTO M232 uye yakaenzana chiyero senge AASHTO M111, EN1461 nezvimwewo. Iyo posvo yakaiswa munzvimbo, yekusunga uye kutsigira gadhi. Inogona kudzikisa simba rekukanganisa nepo tsaona yakawedzera.
Iwo magumo ekupedzisira anonyanya kutevedzera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa).
Iwo mabhaudhi anotsanangurwa muANSI B1.13M yeGiredhi 6 g kushivirira. Bolt zvinhu zvinoenderana neASTM F568M yeChikoro 4.6. Chinyorwa chengura inodzivirira mabhaudhi inoenderana neASMM F 568M yeChikoro 8.83. bhaudhi. Kurapa kwepamusoro kunotevera iyo AASHTO M232.